ETHIOPIA : WAYYAANEEN MAAF GIBIRA OLIIF GADI DHOOFTI? – | Kichuu
ETHIOPIA: WAYYAANEEN MAAF GIBIRA OLIIF GADI DHOOFTI?
1. Waayyaaneen Tilmaama Gibiraa kan oliif gadi dhooftuuf daldaltoota humna hinqabne tapha ala gootee dinagdeetiin dursitee saba cabsitee bulchiinsashee dheereffachuufidha. Fakkeenyaf, lafa gabaa guddicha Markaataa’ keessaa akka kanaan saboota biraa duguugdee ariiteetu Ilmaan Tigiraayi qofa dhuunfachiisteetti. Warreen kaan heeyyama isaanii deebi’anii haaromsuu hindandeenyeef cufanii sokkuuf dirqamu. Mee mana Warqee Naannoo ‘PIYAASAA’ jedhamu snaaa dhaqaa daawwadhaa. Ilmaan Tigray qofaan dhuunfatameera. Qaamni Dinagdeen cime tokkommoo cabsee sibituun waanuma beekamu.
2. Qaamonni dantaa biroofi daldala siyaasa qaxxaamuraaf suusa’an tokko tokkommoo waan achi wayyaaneen gootu hunda ofitti micciirratu. Fakkeenyaaf, Miliyoona 20n waan Saatilite Mediya’ cufsiifteef Gibiraan bakka buufachuuf kktktk Yaa xiinxala Waggaa sadii guutuu ittiin mataan Oromoo hadoodee kana. Safuu, …Uummatuma garraamii kana elmachuuf waan hodhamee hindiigamiin hinjiru.
1. Uummata oromoo dinagdeen guddachuu isa barbaachisa. Dinagdeen kun kan qabsoo oromoo achi butu; kan meeshaa waraanaa bitu; kan dippilomaasiifi hariiroo biyyoota ollaa faana walitti nufidu kkf. Dinagdee hundumaa Miidiyaaf gadi harcaasnee waggaa kuma 1 har’aa bilisummaa hin eegnu. Waci miidiyaa wayyaaneef fiilmii fakkaata.
2. Uummanni Oromoo biyya alaa jiraatu agoobara siyaasaa tokko jalatti utuu kan dhufu ta’ee ofiisa keessaa namoota amanmoo bakka buufatee hayyoota dinagdeefi abbaa qabeenyaa faana mariyatee humna kaappitaalaan of iajaruu qaba. Yoo xiqqaate utuu guyyaatti namni tokko %1 bilisummaasaaf gumaacheeti, waggaatti meeqa walitti qabuu dandeenya? Ogeeyyiin itti yaadaa; Aktvistoota qabaaxxara xiinxalaatiin NGO ofiisaanii dhaabbachuuf kurkuran kaanmmoo afaan qabsiifadhaa!
TAaajjabbiin Bareedduudha mitiiree?
Dhimma Gibiraa ilaalchisee Ibsi ABO akka kanaa gadii jedha!
NB: Gibiraa fi Qaraxni Bittoota Irroomsu Mormamuu Qaba